Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 16ffaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 16ffaa
Berhanu Hundee, Caamsaa 18, 2018
Akkuma beekamu Afaan Oromoo utubaalee (pillars) sadeen Oromummaa (Afaan, Aadaa fi Seenaa Oromoo) keessa isa tokko fi hangafa dha. Injifannoolee Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) hanga har’aatti galmeesse keessaa inni guddaan tokko immoo Qubee Afaan Oromoo ti. Qubeen mallattoo eenyummaa keenyaa ti jechuu ni danda’ama. Dhalootni Oromoo kan har’a diina jilbiifachiisaa jiru kunillee Qubee kanaan yaamama. Qubeen mallattoo bilisummaa ti yoo jedhamellee dhara hin ta’u. Sababa kanaaf Qubeen diinota keenyatti dhukkuba mataa isaanitti taatee; ishii balleessanii qubee Saaba atiin bakke buusuuf hawwu. Qubeen Saabaa ykn Gi’izii Afaan Oromoo barreessuuf akka hin tolle itti himamus, dhugaa kana amananii hin fudhatan. Haa ta’u malee, isaan fudhatanis dhiisanis, waan nuuf ta’u nutu murteeffata malee namni biraa kana nuuf godhuuf mirga hin qabu. Kanaafuu, mallattoo keenya kana tikfachuun, kunuunsuu fi guddisuun dirqama Oromummaa ti.